သွားနှင့်ခံတွင်းအစားထိုးစနစ်စက်ရုံ China Dental Implant System ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
သွားဘက်ဆိုင်ရာကြီးမားသော LED မျက်နှာပြင် torque အသံဆူညံမှုနည်းစေသောဘက်စုံသုံးခြေနင်းထိန်းချုပ်မှု dentistry implant motor
၁။ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော LCD display နှင့် control panel သည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုအဆင်ပြေစေသော၊
2. ကြီးမားသော torque၊ အသံဆူညံမှုမရှိ၊ တုန်ခါမှုအပြင်တိကျမှုတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသောမြင့်မားသောအပူချိန်ဖြင့်ပိုးသတ်နိုင်သည်။
3. အခြားရွေးချယ်စရာ input supply voltage: AC100-110V သို့မဟုတ် AC220-240V;
၅။ ပြုပြင်နိုင်သောလည်ပတ်နှုန်း၊ torque၊ coolant စီးဆင်းမှုနှင့်ရှေ့/နောက်ပြန်၊ စိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော၊
၆။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကိုသင်လိုအပ်သလိုရွေးချယ်နိုင်သည့်လျှော့ချထိန်းချုပ်မှုထောင့် ၁၀ ခု၊
၇။ အစီအစဉ်အမျိုးအစား ၁၀ မျိုး၊ တစ်ခုချင်းစီ၏လည်ပတ်မှုနှုန်း၊ torque၊ coolant စီးဆင်းမှု၊ ရှေ့/နောက်ပြန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရေးအချိုးကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသောအစီအစဉ် ၁၀ မျိုး။
dental straumann implant kit dental implant tools စုစုပေါင်း tool အစုံပါသော dental implant တူရိယာများကိုဖယ်ရှားသည်
၁။ သွားဘက်ဆိုင်ရာ Trephines အမျိုးမျိုးကိုအစုံရနိုင်သည်
၃. ၁၃၅ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယက်စ်၊ သေတ္တာကိုလည်းပိုးသတ်နိုင်သည်
4. 100% ထိပ်တန်းအရည်အသွေး
သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်းသည်သွားနှင့်ခံတွင်းအစားထိုးခွဲစိတ်မှုကိရိယာကို Torque Tools Remove Kit ဖြင့်သုံးပါ
မူရင်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ Brushless Surgery Dental Implant Motor COXO Dental Implant Motor System
၁။ Autoclave ပြန်လုပ်ပါ
၂။ မူရင်းဆွစ်ဇာလန်နည်းပညာသုံးခွဲစိတ် brushless မော်တာ
3. Foot control pedal: ဘက်စုံပြောင်းလွယ်ကူနိုင်သော၊
၅။ အသိဥာဏ်ရှိသောအအေးပေးစနစ်: လက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ခြေထောက်၊ အတွင်းနှင့်အပြင်ရုပ်သံလိုင်းအအေးခံခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်း၊ တိတ်ဆိတ်ပြီးအားကောင်းသောရေစုပ်စက်၊5အမြန်နှုန်းထိန်းညှိရေပေးဝေမှု: 50-100ml/min
၆။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် - LED မျက်နှာပြင်ကြီး 10 setting အစီအစဉ်; stepless မြန်နှုန်းစည်းမျဉ်းကိုရယူပါ
သွားဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်အစားထိုး implant မော်တာ push button အသစ် 20: 1 dental implant contra angle low speed
၅။ အသိဥာဏ်ရှိသောအအေးပေးစနစ်: လက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ခြေထောက်၊ အတွင်းနှင့်အပြင်ရုပ်သံလိုင်းအအေးခံခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်း၊ တိတ်ဆိတ်ပြီးအားကောင်းသောရေစုပ်စက်၊
6 အမြန်နှုန်းထိန်းညှိရေပေးမှု: 50-100ml/min
7. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် - LED မျက်နှာပြင်ကြီး 10 setting အစီအစဉ်; stepless မြန်နှုန်းစည်းမျဉ်းကိုရယူပါ
handpiece 20: 1 ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်ချိုး handpiece နှင့်အတူသွားဘက်ဆိုင်ရာ implant မော်တာ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်းဇာစ်မြစ်၊ တရုတ်မော်ဒယ်နံပါတ်: သွားဘက်ဆိုင်ရာအထက်တန်းလွှာထည့်သွင်းမော်တာပါဝါအရင်းအမြစ်: လျှပ်စစ်အာမခံ ၁ နှစ်ရောင်းချမှု ၀ န်ဆောင်မှု: အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်း: Acrylic၊ သတ္တု၊ ပလပ်စတစ်၊ အစေး၊ ပလပ်စတစ်၊ သတ္တု
elite implant dental ယူနစ်မော်တာစက်စျေးသက်သက်သာသာသွားဘက်ဆိုင်ရာ implant မော်တာစနစ်သွားဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာ
စျေးနှုန်းချိုသာသောသွားဘက်ဆိုင်ရာအထက်တန်းလွှာသွားဘက်ဆိုင်ရာ implant ပါးစပ်ယူနစ်မော်တာစက်သည်မြန်နှုန်းမြင့်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်
dental implant motor system economic implant engine LED system dental dental implant motor
သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ရွေးစင်သွားဘက်ဆိုင်ရာ implant မော်တာစနစ်အရည်အသွေးမြင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထည့် implant မော်တာသည်အရည်အသွေးမြင့်သည်
လျှပ်စစ်သွားဘက်ဆိုင်ရာ implant motor de implantes သွားဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှု implant motor unit
မူရင်းအသေးစိတ်နေရာအကျဉ်း၊ တရုတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်မော်ဒယ်နံပါတ်: သွားဘက်ဆိုင်ရာ implant မော်တာပါဝါအရင်းအမြစ်: လျှပ်စစ်အာမခံ ၁ နှစ်ရောင်း ၀ ယ်မှုဝန်ဆောင်မှု။ အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်း
စျေးသက်သက်သာသာသွားဘက်ဆိုင်ရာ implant မော်တာစနစ်ထုတ်လုပ်သူများစျေး ၀ ယ်သွားဆရာဝန်စက် implant motor